သငျသညျမလိုပါဒါကြောင့်ငါ COVENTRY အတွက်တိုင်းကော်ဖီဆိုင်ကိုသွား၏ - သတင်း
Kasbah - သူငယ်ချင်းများကော်ဖီသို့မဟုတ်နေ့လည်စာစားရန်အတွက်သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ သူတို့မှာဆိုဖာဆိုသူများဆိုလျှင်သူတို့ဟာဘူဂျင်းလို့ထင်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်။ ကောင်းပြီ, ငါပါပဲ။ မိမိကိုယ်ကိုကြေငြာသည့်ကော်ဖီဆိုင်မိဖုရားတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ Coventry ကော်ဖီဆိုင်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပိုမိုကောင်းကျိုးအတွက်ဝေမျှရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။
ထို့ကြောင့်တောက်ပ။ နံနက်စောစောတွင် Cov ကော်ဖီကော့ကော့သို့လာရောက်လည်ပတ်စဉ်ကျွန်ုပ်မိတ်ကပ်အချို့ကိုပါးရိုက်ပြီးသူငယ်ချင်းအားအိပ်ရာပေါ်ဆွဲ တင်၍ ပထမဆုံးအစပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် (နှင့်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ခြင်းအားဖြင့်၊ ငါစားတော့မည့်ကဖိန်းပမာဏကိုစဉ်းစားသည်) ။ စျေးဆိုင်၊ ကော်ဖီအရည်အသွေး၊ နေရာ၏ဗေဒနှင့်အစားအစာရွေးချယ်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ကြယ်ငါးပွင့်ငါးခုတွင်နေရာတစ်ခုတိုင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ဆိုင်တိုင်းတွင်တူညီသော Mocha များကိုမှာယူခဲ့သည်။
ကောင်းသော Vibes သာ
Gulson လမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဤဆိုင်ကို Tailor Me Coffee ဆိုင်ဟုလည်းလူသိများသည်။ ဤနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်အကြီးမားဆုံးအချက်မှာ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောစူပါ duper ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာ၏ပြတင်းပေါက်၌လူနှစ် ဦး အတွက်နေရာအလုံအလောက်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းမှာများသောအားဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်သောသောက်စရာများဖြစ်သည်။ သင်၏နံနက် ၉ နာရီနောက်ကျလျှင်အဆင်ပြေသည်။
စံချိန်ကစားသမား & ငါ
ကော်ဖီသည်အရည်အသွေးအလွန်ကောင်းသော်လည်းချောကလက်အရသာမှာမူကံမကောင်းစွာရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပေါင် ၂.၅၀ ကုန်ကျပြီးကော်ဖီတစ်ခွက်အတွက်စံသတ်မှတ်ထားသည့်နေရာဖြစ်ပြီးကဒ်ပြားသေးသည်။ စာသားအရအစားအစာအရရရှိနိုင်သည့်သီးနှံအရက်ဆိုင်များသာရှိသည်။
သင်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. သေချာမသိကြရသောအခါ
၎င်းသည်အလွန်ချစ်စရာကောင်းပြီးထိုမိန်းမသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်ကောင်းသည် - သူမကအဝတ်အထည်များနှင့်ချုပ်လုပ်သည်။ ငါ mocha နှင့်အတူအဖြူသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်ချောကလက်၏ option ကိုရတယ်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများနှင့်ကော်ဖီအေးခဲခြင်းတို့ပါဝင်ပြီးသက်သတ်လွတ်နို့ရည်များလည်းရနိုင်သည်။ ပိုင်ရှင်က ၀ တ်ထားတဲ့စံချိန်ပလေယာလည်းရှိတယ်။
ကော်ဖီ - 3/5
ဗေဒ - 3/5
အစားအစာ - 1/5
၂။ Dandy ရဲ့ကော်ဖီဆိုင်
အဆိုပါ funky ဆေးသုတ်အလုပ်အတွက်သက်သက်သာယူ
ဤသည်ကိုအသစ်ယူပြီးဖာဂိုကျေးရွာတွင်တည်ရှိသည်။ အရင်ဆိုင်နဲ့မတူတာကအတွင်းခန်းထဲမှာအခန်းများစွာရှိတယ်။ အုပ်စုကြီးတစ်ခုမှာသင်ရှိနေရင်အရမ်းကောင်းတယ်။ လက်ပ်တော့ပ်တွေက uni အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့ပလတ်စတစ်ပလပ်စတစ်အနည်းငယ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
အတွင်းပိုင်းချောကလက်၏ပထမ ဦး ဆုံးသင့်လျော်သောဝန်ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်
အမျိုးသမီးတစ်ဦး squirt အောင်ဘယ်လို
ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အနုပညာများစွာရှိပြီးစက်မှုပုံသဏ္toာန်ကိုနွေးထွေးစေသည်။ ပျော်စရာကောင်းသော jazzy ဂီတသည်လေထုကိုကောင်းမွန်စေပြီးဤနေရာသည်ရိုးရှင်းသော်လည်းနေရာမှန်သို့ရောက်သွားသည်။ ရေခဲသေတ္တာကော်ဖီမရှိသော်လည်းသက်သတ်လွတ်နို့ရည်နှင့်ကိတ်မုန့်အနည်းငယ်သာ (gluten free သို့မဟုတ် vegan options များမရှိသော်လည်းစိမ်းလန်းစိုပြေလှသည်) ရှိသည်။ သို့သော်အလွန်အေးမြသောအတွင်းပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်အပိုအလွှာများဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါ။
ကော်ဖီမှာကော်ဖီတွေအများကြီးနဲ့ချောကလက်တွေပိုများတယ်၊ ဒါပေမယ့်အရမ်းကောင်းတယ်။ ပေါင် ၂.၈၀ ကျတယ်။ ကျန်တဲ့ Fargo Village လိုပဲနေရာတစ်ခုလုံးကအရမ်းအေးပါတယ်။
ကော်ဖီ - 2/5
ဗေဒ - 4/5
စျေးနှုန်း - ၃.၅ / ၅
၃။ Pod Cafe
ဤနေရာသည်လုံးဝသက်သတ်လွတ်ဖြစ်သည်! ဒါဟာဇာတ်ကောင်အများကြီးနှင့်အတူတစ် ဦး အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူတစ် ဦး ၏တသမတ်တည်းစီးဆင်းနေသောလျောက်ပတ်သောထိုင်ခုံများရှိပြီးအခြားသူတစ် ဦး ဦး ၀ င်လာသည်နှင့်အမျှလွတ်မြောက်တော့မည့်စားပွဲတစ်လုံးရှိသည်။ Far Gosford လမ်းတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည် Callice Court နှင့် Gosford Gate မှအနည်းငယ်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
စာဖတ်နေတုန်းအချိန်တွေကုန်လွန်သွားတာကိုအေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့လေထုနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဖွင့်လှစ်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်။ အစားအစာမီနူးသည်အပတ်တိုင်းပြောင်းလဲသွားသည်။ များသောအားဖြင့်သင်ရွေးနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာ (၃) ခုခန့်ရှိသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အစာနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေအရမ်းများပြီးအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းချင်ရင်သွားစရာနေရာကောင်းတစ်ခုပါ။
2020 ခုနှစ်တွင်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဈ instagram ပေါ်ပါလိမ့်မည်
ဒီစျေးနှုန်းကအရမ်းကိုကောင်းလွန်းနေတယ်။ (ဒါမှလွဲရင်!) ။ အချိုရည်အများစုဟာသူတို့ရေခဲသေတ္တာထဲကထွက်လား၊ ကော်ဖီလား၊ လက်ဖက်ရည်လားဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။ အစားအစာတိုင်းကိုပေါင် ၄ ပေါင်ပဲမပြောသင့်ဘူး။
ကော်ဖီ - 4/5
ဗေဒ - 4.5 / 5
စျေးနှုန်း - ၅/၅
အစားအစာ - ၄.၅ / ၅
4. Bean & Leaf ကော်ဖီဆိုင်
ကအများဆုံးကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောအရပ်ဌာန opened- ကတည်းကငါကဒီမှာလာမယ့်ပါပြီ။ လက်တော့ပ်သေနေမှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲအလုပ်ထဲကိုဝင်ဖို့ထိုင်ခုံများအဖုံးများပါတဲ့ထိုင်ခုံအမြောက်အများနဲ့ထိုင်ပြီးအခန်းတစ်ခန်းလုံးလမ်းလျှောက်နေရင်လွယ်လွယ်ကူကူလွတ်သွားနိုင်တယ်။
ခင်ဗျား xo တွေးနေရင်နောက်ထပ်ထိုင်ခုံတွေရှိတယ်
ကော်ဖီတော်တော်များများရှိပေမယ့်ရည်မရရှိနိုင်ဘူး၊ အဲဒါကငါ့ရဲ့ပုံမှန် caramel latte self ကိုစိတ်ပျက်စေလိမ့်မယ်။ လက်ဖက်ရည်ဖျော်ရည်များ menu တစ်ခုလုံးလည်းရှိသည်။ လူများသည်ချစ်စရာကောင်းပြီးသက်သတ်လွတ်နို့သည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသက်သတ်လွတ်၊ အချိုမှုန့်ကင်းသောကိတ်မုန့်များ၊
အခြားကော်ဖီဆိုင်များထက်အနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးသော်လည်း၎င်းသည်အဓိကနေရာတွင်ရှိပြီး Bean & Leaf သည်မြို့လယ်တွင်ရှိသည်။ Mocha သည်ပေါင် ၃.၀၀ ဖြစ်ပြီးအခြားရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
ဗေဒ - 5/5
စျေးနှုန်း - ၂.၅ / ၅
အစားအစာ - ၃/၅
သူတို့တိုးချဲ့နေပြီး 'comin' ခေါ်ရေခဲမုန့်ဆိုင်အသစ်တစ်ခုရှိတယ်။
ရထားဘူတာကနေလမ်းလျှောက်ရုံလောက်သာဝေးတဲ့ Warwick Row မှာတည်ရှိပြီးဒီနေရာဟာအလှကိုနှစ်သက်စရာပါ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဤမျှလောက်များစွာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပတ် ၀ န်းကျင်အသေးစိတ်နှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်းများကိုအထူးဂရုပြုပါသည်။
အကယ်၍ သင်အဖွဲ့လိုက်စီမံကိန်းတစ်ခုမှစာကြည့်တိုက်မှပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလိုအပ်ပါကအုပ်စုများအတွက်ထိုင်ခုံကောင်းများနှင့်ဆိုဖာနေရာများရှိသည်။ ရေခဲကော်ဖီရရှိနိုင်သည်။ ခေတ်မီဂီတနှင့်အတူထိုင်။ အလုပ်လုပ်ရန်ပလပ်ဂင်များစွာရှိသည်။
ကော်ဖီကောင်း = ပျော်ရွှင်တဲ့ကောင်
ကော်ဖီသည်စိမ်းလန်းစိုပြေနေပြီးသင်ကပေါင် ၃.၂၀ ဖြင့် Biscoff biccie အနည်းငယ်ရရှိသည်။ Bean & Leaf ရှိအလားတူမီနူးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအစားအစာအားလုံးသည်စျေးကြီးလွန်းသည်။ အိတ်များနှင့်ဟင်းချိုများလည်းရှိသည်။
စျေးနှုန်း - ၂/၅
အစားအစာ - ၃.၅ / ၅
6. ကော်ဖီ # 1
ဒီဆိုင်ကလူများစွာနဲ့အတူပွင့်လင်းပြီးတောက်ပတယ်။ ရထားဘူတာရုံ၏ဘေးတွင်ရှိခြင်းနှင့်အပြင်၌ဖြစ်စေ၊ အစည်းအဝေးများတွင်ပါ ၀ င်သူအများအပြားရှိခဲ့သည်။
ငါ့ဝိညာဉ်ထက် Beanie ပိုမိုတောက်ပသည်
သက်သတ်လွတ်စားစရာများ (အစာအပြင်အချိုရည်များ) နှင့်ဖျော်ရည်နှင့်ဖျော်ရည်များပါဝင်သည့်အချိုရည်မီနူးများနှင့်ကော်ဖီအေးခဲသည့်ကော်ဖီများပါဝင်သည်။ အစားအစာ၏အကြီးဆုံးရွေးချယ်ရေး။ သို့သော်လည်းဤသည်မှာကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောပထမ ဦး ဆုံးကော်ဖီကွင်းဆက်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒေသတွင်းကိုထောက်ပံ့ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုထင်မြင်သည်။
ကော်ဖီကအရမ်းကိုအရသာရှိပြီးပေါင် ၂.၉၀ သာရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရကော်ဖီထက်ချောကလက်အများထက်ပိုများသည်။ ဒီအစားအစာကိုပေါင် ၄ / ၅ နဲ့ပတ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဗေဒသည်ညံ့ဖျင်းသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အလင်း၏လွှမ်းမိုးမှုအတွက်မဟုတ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုစွဲမက်စရာမလိုဘဲအလင်းသည်ဓာတ်ပုံများအတွက်မကောင်းပေ။
ကော်ဖီ - ၃.၅ / ၅
ဗေဒ - 2.5 / 5
အစားအစာ - 4/5
ဟုတ်ပါတယ်, Coventry မှာအခြားကော်ဖီဆိုင်တွေအများကြီးရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံမှာ Phoenix မှာဇွန်းနဲ့ပေါင် ၁ ပေါင်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းသောကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုဈေးပေါတဲ့ပြန်လည်ဖြည့်အချိုရည်တစ်ခွက်ကိုမသောက်နိုင်ပေ။
အဲဒါကျိုးနပ်ပြီလား။ သေချာသည်။ လူတိုင်းသည်အမီလိုက်ရန်သို့မဟုတ်အချို့သောအလုပ်များတွင်ခေါင်းကိုက်ရန်ကော်ဖီဆိုင်များစွာလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ချိုမြိန်။ လှပနေသည့်လွတ်လပ်သောကော်ဖီဆိုင်အချို့ရှိသည်။ အဲ့ဒီကဖိန်းဓာတ်တွေအများကြီးပြီးနောက်မှာကျွန်မရရှိထားတဲ့ငုပ်နေတာပဲ။